Tattoo Mazano Vagadziri, Vatengesi - China Tattoo Matipi Fekitori
Yepurasitiki Yepurasitiki Inoraswa Matipi
Maitiro: yakajeka, yakasviba-yakatetepa, yakawanda inki yekuchengetedza. 1. Zano retsono rakagadzirwa nezvinhu zvinochinja, zvichiita kuti zvive nyore kucherechedza tsono. 2.Inovhenekera curve materu dhizaini, yakawanda inki yekuchengetedza uye inotsvedza; 3. Rusvingo rwepamuromo rwemuromo rwakanyanya-rwakaonda, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuwana tsono uye kusasiya nzvimbo. Matipi ekusarudza matinji etsono etsono dzenzara: Tsono dzakatenderedza (RL, RS) dzakashongedzwa nemhando dzemasero eR, uye misoro yepini (F, M1, M2, RM) yakagadzirirwa F nozzles. Pakati t ...
Chigadzirwa chigadzirwa: yepamusoro Pe epurasitiki Chigadzirwa chemuvara: chena uye yakajeka Chigadzirwa uremu: inenge 100g / bhokisi Chigadzirwa tsananguro: bhokisi remabhokisi zana, bhokisi re50, blister kurongedza, yakachena uye yehutsanana, ikozvino kune makumi matatu mamodheru kusarudza kubva kuZano. yekusarudza tsono dzesimbi dzeturu tsono: Denderedzwa tsono (RL, RS) dzakashongedzwa neR uye D tsono maburi, uye pini misoro (F, M1, M2, RM) yakagadzirirwa F tsono misi. Pakati pavo, M2 mutsara wakapetwa kaviri, uye inoenderana tsono simbi iri hal ...
Hurricane Blue Plastic Inoraswa Matipi neGrip Stop
Kukura: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F-9F-11F-13F-15F- 17F Pre-sterilized ipfupi inogona kuraswa Tattoo Matipi Chinyorwa: epurasitiki yemhando yepamusoro Izvo zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro giredhi zvinhu, zviri nyore kushanda, zviri nyore kwazvo. Iwo matipi ezve tattoo anogona kukudzivirira kubva kuhutachiona hutachiona. Tsananguro yechigadzirwa 1.High mhando uye mafashoni maitiro; 2.Easy kushanda; 3.nehunyanzvi dhizaini, hutano, hwakachengeteka, husina kutsvedza 4.Makwikwi mutengo; 5.Good kunzwa uye kugadzikana kana uchishandisa ini ...
Hurricane White Plastiki Inoraswa Mazano
Yakatengeswa neBHOKISI YA 50 Saizi: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F-9F-11F. -13F-15F-17F Yakakwira mhando PVC yakaoma epurasitiki inodzivirira kukotama Pre-Sterilized neEO Gasi Imwe Blister Yakapakurwa Inoenderana neZvese tatoo Grips Yakajeka matipi saizi Kureba: 50mm Chigadzirwa Tsananguro Yakanyatsogadzirirwa tip inobvumidza kupinza tsono yekuisa uye yakanakisa kuyerera kweingi. Semi-yakajeka njere yeiri nyore ruvara id ...
Bvisa 108mm Sterilized Matipi NeGrip Stop Transparent Yakareba Inoraswa Tattoo Matipi Kune Tattoo Tsono
Yakakwira mhando matipi matipi, nyanzvi chena uye isina kukuvara matipi matipi. Yakakwira mhando uye yepamusoro Inoraswa Sterilized Mazano Matatoo Matipi maTattoo Matipi eiyo tattoo tsono Chigadzirwa Chigadzirwa: Inoraswa Yakajeka Tattoo Matipi Anowanikwa Masizi: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D- 9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F-9F-11F-13F-15F ** 5M-7M-9M-11M-13M-15M Model Nhamba: ZZ-010 Kurongedza: 50Pc / bhokisi MOQ: 10 Mabhokisi Hunhu: 1st Kirasi Chigadzirwa zita: Tattoo Matipi Chinyorwa: Chipurasitiki Kurongedza: 50pcs / bhokisi, zvakasiyana zvakarongedzwa ini ...
Nhema 108mm Sterilized Matipi Nekubata Kumira Yakareba Inoraswa Tattoo Matipi Kune echinyakare Tattoo Tsono
108mm Nhema Inoraswa Tattoo Matipi ane grip yekumira Anowanikwa Masikirwo: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F -9F-11F-13F-15F R: inoshandiswa kune yakakomberedza liner & shader tsono F: inoshandiswa kune sandara & magnum tsono D: Matipi ediimani anogona kushandiswa kune yakakomberedza liner kana shader tsono, kunyangwe iwo achiwanzoshandiswa kumisikidza sechimiro che iyo tip inobvumira kumwe kutonga pamusoro pekufamba kwetsono uku ichipa groove yeingi kuyerera. Nhanganyaya: Inotengeswa neBHOKISI YEMakumi mashanu emhando yepamusoro ...